Falanqaynta Xisaabiyaha Lacag-bixinta | Martech Zone
Sabti, Agoosto 12, 2006 Douglas Karr
Dadyohow ma u maleyn kartaan inay tani xiiso ii leedahay sidaan aniguba sameeyo, laakiin kani waa shaashadda shaashadayda Xisaabiyaha Lacagta. Xaqiiqdii waxaan u arkaa mid xiiso leh in dhammaan hits-ku yihiin inta lagu jiro usbuuca iyo wax uun dhammaadka wiigga. Waxaan u maleynayaa in aan haysto 2 nooc oo soo booqdayaal ah, kuwa xisaabinaya koror qof kale ama kuwa naftooda u xisaabinaya koror Waxaan u maleynayay in kooxda dambe ay hubin doonaan waxyaabaha sidan oo kale ah dhamaadka usbuuca… laakiin waxaan u maleynayaa inaysan aheyn.
Waan ogahay inaan u baahanahay inaan ka takhaluso goobta helitaanka natiijooyinka soo baxa! Sannadkan, laga yaabee. 🙂
Sep 23, 2009 at 1: 25 PM
Kuwa doonaya inay ogaadaan… kani waa barta 1aad ee xisaabinta mushahar kordhintaada! Waxaan aad ugula talinayaa. Waxaan dhowaan helay mushahar kordhin iyo waliba kordhin dheeri ah oo ku saabsan hawlgabka. Waxaan xisaabiyey boqolleyda la isku daray oo aan helay macluumaadka saxda ah ee ka muuqday jeeggayga mushaharka. Waad ku mahadsan tahay, Qallaf, siinta qalabkan qiimaha badan.